Casa Tucan - I-Airbnb
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguGloria
Icocekile kwaye icocekile ivulekile 3-2 ikhaya lelizwe langoku entliziyweni yeSarapiqui Rainforest ngokuqwalasela iinkcukacha. Ifumaneka kwiparadesi yasemaphandleni. Singenza amalungiselelo, kunye nabamelwane bethu basekhaya, ukutya okuphekwe ekhaya, ukhenketho lwasekhaya kunye nokuphola kwama-massage yobuchwephesha
Ime phakathi kweVolcan Poas kunye neBraulio Carrillo National Park, iimayile ezingama-40 nje kumntla weSan Jose kunye neekhilomitha ezingama-20 ngaphambi kweSikhululo seBiological seLa Selva, eli khaya lihle libekwe kwindawo edityanisiweyo njengenkampu yokhenketho lwakho lwaseCosta Rican. Ikhaya lethu lanamhlanje elinobuhlobo kwi-Eco linamagumbi okulala amabini abanzi, amagumbi okuhlambela ayi-2.5 kwaye axhotyiswe ngokupheleleyo. Ifakwe kwidolophu encinci enobuhlobo.
Bukela iitoucans kunye neenkawu ezinobuso obumhlophe ngelixa utyela kwidesika.
Abamelwane abakhulu kunye nendalo emangalisayo!
Nazi iingcebiso ezimbalwa zeendawo onokundwendwela kufutshane nendlu....
1.) I-Volcan Poas - Ilungele ukuhamba
2.) La Paz Water Fall okanye Peace Lodge- Indawo enkulu yokutya nokubona indalo
3.) Laguna Bosque Alegre - iimbono ezoyikekayo echibini kunye nokuba isidlo sasemini
4.) Mi Cafecito Coffee Tour - Indawo enkulu yokutya kwaye uthathe ukhenketho lwekofu
5.) iTirimbina Reserve - Cebisa ukhenketho lwetshokholethi
6.)La Selva Biological Station- ukukhwela intaba
7.) Hacienda Pozo Azul - Ukunyuka intaba, ukukhwela ihashe, i-canopy
8.) I-Agua Bravas -I-rafting yamanzi amhlophe
9.) Ihotele el Toucano - Imithombo eshushu
10.) Phumla. La Montana Ukutya okukhulu
11.) Ukukhwela isikhephe - Puerto Viejo de Sarapiqui
12.) Birdwatching- ukusuka intuthuzelo hammock yakho ekhaya
Ndiza kukubonelela ngalo naluphi na ulwazi onokulufuna, ndikunike imibono yeendawo onokundwendwela kuzo okanye izinto onokuzenza kwindawo leyo. Ubushushu bemini buphakathi kwama-80 kwaye ebusuku buphezulu ngama-60.